Uhlobo lweGothic Multi span Greenhouse Abavelisi - China Uhlobo lweGothic Multi span Greenhouse abaXhasi kunye neFektri
Umzi-mveliso wokubonelela ngeMultan-span Flower Greenhouse NgeBench eqengqelekayo kunye nayo yonke inkqubo yokhetho-PMG006
Uhlobo lweVenlo oluninzi lweglasi yegreenhouse luhlobo oluphambili lwegreenhouse olwaziswe luvela eNetherlands. Inenkangeleko yanamhlanje, ulwakhiwo oluzinzileyo, ukusebenza ngokugqwesileyo kokugcina ubushushu, imikhombe yemvula emininzi, isithuba esikhulu, ulwakhiwo lwegridi, umsele omkhulu, ukumelana nomoya onamandla, kwaye kufanelekile kwiindawo ezinomoya omkhulu nemvula. Ngenxa yokuhambisa okuphezulu kokukhanya kunye nokusebenza okuphezulu kwe-thermal insulation, kufanelekile ngakumbi kwezinye iimveliso ezifuna ukufakwa kwe-thermal kwaye zibe nexabiso eliphezulu.
Ixabiso eliphantsi kwiifilimu ezinkulu zorhwebo ngefilimu nakwiglasi yeglasi eluhlobo lweGothic yezolimo.
Ukukhetha ukufakwa okuphezulu kwe-thermal kunye nokukhanya okuphezulu kokuhambisa umboniso bhanyabhanya njengezinto eziphambili zokugubungela iglasi yokunciphisa iglasi kunciphisa kakhulu utyalomali lwabatyali mali, ngelixa kugcinwa ubuhle kunye nokuqina kweglasi eluhlaza. Kwaye kufuneka kuphela ukucoca ifilimu ephezulu rhoqo. Ukunciphisa ulondolozo kwinqanaba elizayo, kwelinye icala, kunciphisa iindleko ezithile.
Igreenhouse yeglasi yokutyala imifuno kunye nokulima izithole-PMG003
I-Large-span Nursery Greenhouse, Unkcenkceshelo oluzenzekelayo / umoya opholileyo / Ukulayita / uLawulo lobushushu-PMG004
Iinkampani zeMveliso zaseTshayina eziFakelwe ngokulula iiNdawo zeGreenhouse zeGreenhouse ene-Elliptical I-Tube-PMG005